Kadib go'aankii maxkamada sare ee Kenya, maxay tahay tallaabada xigta? - Caasimada Online
Home Dunida Kadib go’aankii maxkamada sare ee Kenya, maxay tahay tallaabada xigta?
Kadib go’aankii maxkamada sare ee Kenya, maxay tahay tallaabada xigta?
Go’aankii Maxkamadda Sare ee Kenya ay waxba kama jiraanka kaga soo qaadday natiijada doorashadii madaxtinimada ayaa ka dhigan in axsaabta siyaasadda ay markale dib ugu laabtaan olole doorasho kahor doorashada ku celiska ah.
Go’aanka Maxkamadda Sare oo aan horay uga dhicin qaaradda Afrika ayaa muujinaya madax banaanida waaxda garsoorka iyo sida ay uga go’an tahay in ay wajahaan murranada ka dhashay doorashada.
Odinga waxaa uu u muuqday qof ay ka go’antahay in uu sii wado dagaalka uu ugu jiro in mar afaraad uu u tartamo xilka, dad badan se waxaa ay rumesnayeen in ay tahay fursadiisii ugu danbaysay ee uu Odinga ugu tartamo xilka madaxtinimada.
Raila Odinga ayaa doorashadii dhacday 8-dii bishii August ka dib waxaa uu go’aansaday in uu maxkamad aado, taasi oo yareysay walaaci laga qabay in dalka uu faraha la galo rabshado.
Hasayeeshee go’aanka isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee ahaa in ay diirada saaraan cadaalada ayaa noqday mid mira dhal ah.
Dad badan na waxay rumesanyahay in waaxda cadaalada ee kenya ay ka soo muuqatay go’aan taariikhi ah.
Garsooraha maxkamadda sare, David Maraga ayaa markii uu ku dhawaaqay go’aanka maxkamadda xusay in wax dambi ah aan lagu helin Uhuru Kenyatta, balse cilladu ay ka timid geedi socodka codeynta.